हामी धेरै लामो कपाल लागि आधुनिक केश चयन
धेरै लामो कपाल लागि Haircuts एकदम वैविध्यपूर्ण छन्। आज, बालिका तथा महिला को बहुमत लागि अप्ट छन् , छोटो Hairstyles तिनीहरूले आराम गर्दै छन् र स्थापना मा धेरै समय आवश्यक छैन किनभने। तर, राय पोल अनुसार, यो त लामो कर्ल मानिसहरू एक, मुलायम स्त्री र सेक्सी तिनीहरूलाई सम्बद्ध गरेर महिला मूल्यांकन थियो। त्यसैले आज हामी तपाईंलाई कटौती र आफ्नो कपाल धेरै लामो छ शैलीमा कसरी हेर्न हुनेछ। लामो कपाल - यो कपाल छ, तर यो तिनीहरूले सफा कंघी र groomed एकै समयमा हो कि महत्त्वपूर्ण छ। तर तपाईं पनि Hairstyles को एक किसिम गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, तपाईं बस एक सीधा लाइन मा बाल कटौती गर्न सक्नुहुन्छ। यो केश चिटिक्क, तर नीरस हेर्न हुनेछ। स्टाइलिश हेर्न र लामो किसिमहरु को मर्यादा जोड गर्न, राम्ररी केश रोचक, व्यावसायिक कारीगरों अब सबैभन्दा प्रस्ताव विशेष गरी रूपमा चयन गर्न असामान्य केश धेरै लामो कपाल लागि।
लामो कपाल को समस्या को लागि एक केश कसरी चयन गर्न
लामो कपाल अन्यथा यो आफ्नो अपील गुमाउनु हुनेछ, धेरै सावधान हेरविचार आवश्यक छ, र सुझावहरू विभाजित गर्न थाल्छन्। तसर्थ, एक महिना तिनीहरूले podstrigatt हुनुपर्छ पटक मात्र तिनीहरूलाई राम्ररी groomed उपस्थिति दिने। त्यसैले, धेरै लामो कपाल लागि केश को प्राथमिक वा sostriganiem विभाजन समाप्त को लम्बाइ ट्रिम गरेर हासिल गर्न सकिन्छ बनाउन।
Bangs र लामो कपाल
कपाल को लम्बाइ परिवर्तन बिना विविधता बाल, तपाईं धमाका गर्न सक्छन् - यो कुनै पनि तरिका ताजा हुनेछ। आज भन्दा सुशील एक मोटी bangs (सीधा वा विकर्ण) - को ब्रो लाइन। त्यो सधैं स्टाइलिश देखिन्छ र यसको possessor धेरै साना देखिन्छ बनाउँछ। यो पनि कुनै पनि fringe व्यक्ति र यसको विवरण ध्यान आकर्षित गर्ने उल्लेख गर्नुपर्छ, त्यसैले आफ्नो अनन्त साथी हुनेछ भन्ने सुन्दर मेकअप लागि तयार हुन।
कुनै पनि आकार को fringe विशाल धेरै लामो कपाल अर्को सैलुन देखिन्छ, - "। सीढी" पूर्ण मात्रा, घुम्रेको सहित सबै बाल प्रकार को लागि उपयुक्त भन्छन् रूपमा र विकल्पहरू क्रमबद्ध को एक किसिम प्रदान गर्दछ यो 10 वर्ष को लागि लोकप्रिय छ। यस्तो केश तपाईंलाई सधैं सुन्दर र स्टाइलिश हेर्न हुनेछ।
एक व्यापक अनुहार लागि Haircuts
लागि धेरै लामो कपाल माथि व्यापक अनुहार ठूलो विकल्प सैलुन संग मांसल बालिका हुनेछ एक गालामा स्तर मा गरे "भर्याङ"। दुई पत्रहरू, अधिक लामो छोटो झूठ कहाँ मा किसिमहरु कटौती: तपाईं पनि एक "टोपी" बनाउन सक्छ। र यो केश मौलिक परिवर्तन गरिएको छैन यद्यपि, अझै पनि यसरी इच्छित रकम दिने, दुवै भित्र र बाहिर आफ्नो बाल शैली गर्न सक्षम हुनेछ। तपाईं बस केश आकर्षण दिन हुनेछ जुन उनको कपाल को अन्त्य, Profiled गर्न सक्नुहुन्छ।
सबैभन्दा सान्दर्भिक आज बस सीधा बाल लामो कपाल हो। तर तिनीहरूलाई त बनाउन क्रममा, तपाईं एक विशेष माटोको किन्न आवश्यक बाल फलाम। यो उपकरण तिनीहरूलाई आकर्षक र चिल्लो बनाउने, पनि आफूलाई unruly किसिमहरु सामना गर्न सक्षम छ।
bangs बिना धेरै लामो कपाल धेरै बालिका कपाल को लामो टाउको लागि Hairstyles bangs बिना चयन गर्नुहोस्। बीचमा वा छेउमा एक सरल (सीधा, नागबेली वा अप्रत्यक्ष) parted बनाउन, तपाईं एक धेरै राम्रो स्त्री स्टाइल प्राप्त गर्न सक्छन्। यो बाल सामान प्रयोग विविधता गर्न सक्नुहुन्छ।
हामी रंग Estel डिलक्स प्यालेट ठूलो छ
समीक्षा र प्रक्रियाहरु: प्रयोग darsonval कपाल रूपमा
स्टाइल 'भिजेको प्रभाव'
गोलो अनुहार लागि Bangs - राम्रो र आरामदायी
लामो कपाल लागि हल्का Hairstyles, तपाईं आफैलाई बनाउन सक्छ
निसान 350Z: पाँचौं पुस्ता पहिलो
Lamiaceae परिवार: विवरण
वृद्धि दर गणना गर्न कसरी जानकारी र वृद्धि दर
विश्वव्यापी काठको काम मिसिन: के उहाँले राम्रो छ?
आफ्नो हातमा एक डिस्टिलर कसरी बनाउने? विस्तृत विवरण
मातृभूमि सुनगाभा कोठा। सुनगाभाहरू लागि माटो संरचना
खेल GTA 5: धोखा देती छ
पाना जम्मा - निर्माण कार्य को सुरक्षित आचरण गर्न प्रमुख
के उमेर बच्चा मटर सूप गर्न सक्छन् मा? बच्चालाई आहार व्यञ्जनहरु मा मटर को परिचय को नियम
ढाँचा टी-शर्ट: सुविधाहरू मोडेल